Resipe masira sy voankazo 9 vita amin'ny Thermomix. Matsiro | ThermoRecipes
Resipeo 9 masira sy voankazo
Ascen Jiménez | 29/07/2021 10:30 | Resipeo amin'ny fahavaratra
Ny fanangonana anio dia natokana ho an'ny voankazo. Manolotra soso-kevitra mahasalama sasany izahay izay, na dia toa tsy takatra aza, dia mahavariana amin'ny manga, poara, kiwi, paoma, serizy, voaloboka na apricots.
Manana salady, menaka mangatsiaka, mofomamy matsiro ... izay miavaka amin'ny azy ireo originality Ary, mazava ho azy, satria matsiro izy ireo.
Tombana vary misy voaloboka - Azo atao anaty boaty fisakafoanana ceramic sy amin'ny vilany tanimanga. Inona no tsy anananao? Mampiasà peratra fampisehoana.
Voninkazo serrano ham misy kiwi sy saosy fromazy - Ireo voninkazo serrano ham matsiro dia manambady tanteraka miaraka amin'ny tsiro kiwi. Ny saosy fromazy dia vita haingana noho ny Thermomix.
Fromazy manga masira sy tart poara - Vita miaraka amin'i Gorgonzola fa azo omanina miaraka amin'i Roquefort koa. Ary antenaiko fa, raha tianao ny fromazy manga dia ho tianao izany.
Laisoa miaraka amin'ny voanio, voaloboka ary legnuts - Hanome doka hafa momba ny laisoa voaaro mahazatra izahay.
Krema mangatsiaka avy amin'ny boka sy paoma - Azo atao mialoha mba ho vonona. Azontsika atao koa ny mandray azy io amin'ny fotoana rehetra.
Voasary amin'ny saosy misy ovy - Azontsika atao ny manompo azy mangatsiaka, toy ny salady. Safidy iray hafa ny fanaovana tsy misy ovy masaka ary ampiasao ireto peppers ireto hanaraka ny ampahany amin'ny hena na trondro.
Salady laisoa sy serizy amin'ny toast - Hevitra salady iray hafa amin'ity fahavaratra ity. Mitondrà laisoa, serizy, ovy ary paoma. Ary voahosotra tamin'ny saosy mustard sy saosy yaorta avokoa.
Apricot gazpacho - Tsy misy fialantsiny intsony hihinanana sakafo mahasalama, misy voankazo sy legioma betsaka. Amin'ity fomba fahandro ity dia tsy maintsy apetraka ao anaty vera fotsiny ireo akora rehetra avelao ny Thermomix® hahandro ho antsika.
Mango salmorejo miaraka amin'ny bacon crispy - Salmorejo matsiro namboarina tamina voatabia sy manga ary nasiana bacon crispy. Fanombohana tsara amin'ity fahavaratra ity.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Resipeo amin'ny fahavaratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » lahatsoratra » Recipe manokana » Resipeo amin'ny fahavaratra » Resipeo 9 masira sy voankazo
Resipeo 9 misy legioma fahavaratra (ho anao izay manana zaridaina na zaridaina)
Recipe 9 tsy mampino miaraka amin'ny sifotra